စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ Bearing အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေး | 1D;ONE
burming bearing crankshaft
1D; စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ, စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးတစ်ခု& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
1D အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအဓိက bearing s စက်ရုံ, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
0 မ်းသာမှုနှင့်ချောချောဆီယံ0န်းကျင်ကိုကစားရန်အတွက် Crankshaft နှင့်ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ခြင်း၏ပုံသေ bracket တွင်တပ်ဆင်ထားသောကြွေပြားများတပ်ဆင်ထားသည်။
Crankshaft bearing shells များကိုယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ အခွံများနှင့်လောင်ကျွမ်းနေသောအခွံများပါရှိသည်။ Flanging bearing bush သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စေရုံသာမကလက်ကိုင်ရုံ၏ axanial positioning ၏အခန်းကဏ္ play မှပါ0င်သည်။
အသစ်သော bearing ကိုထိုင်ခုံအပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းပြားများအဆုံးတစ်ခုစီသည် 0.03-0.05mm ထက် 0.03-0.05mm ထက်ပိုမိုမြင့်မားရမည်။ Bearing Bush သည်ထိုင်ခုံအပေါက်နှင့်နီးကပ်စွာနှင့်နီးကပ်စွာကိုက်ညီစေရန်နှင့်အပူပိုင်းခွဲစိတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်သေချာစေရန်။
Bearing Bush ၏အရှည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၏အတွေ့အကြုံသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - Bearing Bush ကိုထည့်သွင်းပါ, bearing bus ကို install လုပ်ပါ။ အဖုံးအကြား 0.05 မီလီမီတာအထူနှင့်အတူ bolt one bolt တင်းကျပ် အခြားအဆုံးနှင့် bearing ချုံထိုင်ခုံလေယာဉ်ပေါ်မှာ။ ဒီအဆုံးမှာရှိတဲ့သော့ခလောက်ရဲ့ torque ရဲ့ torque ကို screque ကိုရောက်တဲ့အခါ, Gasket ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်, bearing limage သည်ရှည်လျားလွန်းပြီး Tenton ချိန်းချက်ခြင်းမရှိဘဲသက်တမ်းရှည်သည်, Gasket ဆွဲထုတ်နိုင်ပါကချုံပုတ်ရှိသောချုံ၏အရှည်သင့်လျော်သည်; အကယ်. gasket သည်သတ်မှတ်ထားသော torque တန်ဖိုးကိုတင်းကျပ်စွာမအောင်မြင်ပါက, bearing bush သည်တိုလွန်းပြီးပြန်လည်ရွေးချယ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Bearing Bush ကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်း၏မထိုက်မတန်ရှင်းလင်းရေးကိုစစ်ဆေးရမည်။ စစ်ဆေးခြင်းအတွင်း, bearing bush နှင့် bearing bush နှင့်ဂျာနယ်ကိုဆလင်ဒါစံနှင့် micronely နှင့်တိုင်းတာသည်နှင့်ကွဲပြားမှုသည်မထိုက်မတန်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သည်။ bearing bush ၏မထိုက်မတန်ရှင်းလင်းရေးအတွက်စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ချိတ်ဆက်ထားသောချုံပုတ်တွင်အင်ဂျင်အဆီအလွှာကို သုံး. သတ်မှတ်ထားသောစာနယ်ဇင်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလှံတံများကိုအသုံးပြုပါ, ထို့နောက်တန်ဖိုးကိုလက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် 1 ~ 1/2 အလှည့်ကိုလှည့ ်.0င်ရိုး ဦး တည်ချက်တစ်လျှောက်ချိတ်ဆက်ထားသောလှံတံကိုဆွဲနိုင်သည်။ ကွာဟချက်မရှိတော့ပါက၎င်းသည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဘုရ်ှကရိန်းကိုဆောင်သောဘုရ်ှ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအင်ဂျင်ဆီကို အသုံးပြု. စက်ဝိုင်းတစ်ခုစီ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအင်ဂျင်ဆီကိုအသုံးပြုပါ, crankshaft ကို install လုပ်ပါ, လှည့်နှင့်လည်ပတ်အလင်း, ယူနီဖောင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ 2012 ခုနှစ်မှစ. ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများအကြားယုံကြည်မှုအရှိဆုံးအမည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားမှာမိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနချုပ်သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်။ Gusngzhou; ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးအမည်များကြားတွင်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုထွင်းထုပြီး, ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အထူးရည်ရွယ်ချက်များကိုရရှိရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်မသွားနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်သောပါရမီနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ ဤအချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးရိုးဗီဇတစ်ခုလုံးတွင်အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းမှအကြံပြုထားသည့်တင်းကျပ်သောမူဝါဒများနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများကိုမွေးစားသည်။ ဤအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ, အမိန့်များပြည့်စုံခြင်း၏ပြည့်စုံမှုနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြုမူဆက်ဆံမှုများနှင့်အချိန်မီအာမခံချက်တို့သည်လည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်မနာလိုသောနယ်ပယ်တစ်ခုကိုနေရာချထားရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။